एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको कुल बीमा शुल्क २१ करोडले बृद्धि, अन्य सूचांक कस्तो ? – Insurance Khabar
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको कुल बीमा शुल्क २१ करोडले बृद्धि, अन्य सूचांक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार १२:२०
काठमाडौं । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको अवधिसम्म ८१ करोड १८ लाख १७ हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । समीक्षा अवधीको अघिल्लो आवको तुलनामा करिब २१ करोडले बृद्धि हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ६० करोड १८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ कुल बीमा शु्ल्क आर्जन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको समीक्षा अवधिमा कम्पनीले छ करोड ८ लाख ६ हजार रुपैया खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ५ करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ खुुद नाफा कमाएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको अवधिसम्ममा कम्पनीले ३८ करोड ४४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले नौ करोड ६४ लाख ९० हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले चौथो त्रैमासको अवधिमा ८७ हजार ८ सय ८६ वटा बीमालेख जारी गरेको छ ।
एक अर्ब ४ करोड २९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको बीमा कोषमा १४ करोड ११ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको बीमा कोषमा २२ करोड ७२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जम्मा रहेको छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चौथो त्रैमासको अवधिमा ३४ करोड ३९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कुल दावी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ११ करोड ७० लाख ८४ हजार रुपैयाँ कूल दावी भुक्तानी गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ५ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेर नेटवर्थ १३५ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर कूल सम्पत्तिको मूल्य १८६ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ ।
पठाओले सम्मान गर्यो २५ उत्कृष्ट महिला राइडरलाई